Pokemon Go ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ Android Androidsis
Francisco Ruiz | | Android Root ပါ, ပိုကီမွန် Go ကို, လဲ tutorial
ဒီနေ့မင်းကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီရှင်းပြချင်တယ်၊ Pokemon Go ကိုဘယ်လိုကစားမလဲ သို့မဟုတ် Samsung Pay သို့မဟုတ်အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်အခြားလုံခြုံသောငွေပေးချေခြင်းအပလီကေးရှင်းစသည့် Android Pay application များကိုသုံးနိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်သင့်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပြသခဲ့သည် Pokemon Go ကိုကစားရန် Root အသုံးပြုသူများနှင့် Root ကိုဖျောက်ထားနိုင်သည် သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိရိယာများမှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေရန်ရှိပြီးသားအပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုပါ၊ ယနေ့သုံးစွဲသူများစွာ၏တောင်းဆိုချက်အရကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ SuperSu အသုံးပြုသူများဟုတ်မဟုတ်ပေါ် မူတည်၍ Root ကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများကိုပြပါလိမ့်မည်။ KingRoot ကဲ့သို့သော application များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်ခဲ့သည် မင်းရယ်။ သင်လိုချင်လျှင်သင်သိ Pokemon Go ကိုကစားရန်သင်၏ Android ရင်းမြစ်ကိုစွန့်လွှတ်ပါ သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုလျှောက်လွှာများကိုသုံးပါ၊ «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ပါ။ ငါအရာအားလုံးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှင်းပြ။
1 Pokemon Go ကိုကစားဖို့ Android ကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ
1.1 SuperSu အသုံးပြုသူများအတွက် Android Unroot
1.2 KingRoot နှင့်အလားတူအက်ပ်များမှ Root ဖယ်ရှားပစ်ရန်
1.3 Cyanogenmod အသုံးပြုသူများသည် Pokemon Go ကိုမည်သို့ကစားရမည်နည်း
Pokemon Go ကိုကစားဖို့ Android ကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ
SuperSu အသုံးပြုသူများအတွက် Android Unroot
အဲ့ဒါ ၎င်းသည် Chainfire မှဖန်တီးထားသော Superuser ခွင့်ပြုချက်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ သင်၏ terminal ကို Root လုပ်ပြီး SuperSu သည်ပုံမှန်အားဖြင့် Android application များ၏ Root ခွင့်ပြုချက်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အသုံးပြုသည်ဆိုပါက Android terminal များတွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောင်မြင်ဖို့ကိုလိုက်နာဖို့ဖြစ်စဉ်ကို Android ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး Pokemon Go ကိုကစားနိုင်မှာပါ သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပါ၊ ၎င်းတို့သည် application ၏ setting မှကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက application ကိုဖွင့်ဖို့ပဲ အဲ့ဒါ နှင့်သွားပါ setting များကို အတူတူပင်
Setting ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် option ကိုမရောက်မချင်းကျွန်တော်တို့ဆင်းသွားမှာပါ ပြည့်စုံ derrotation
ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် ပြီးပြီ unroot ၀ င်းဒိုးအသစ်ဟာသတိပေးချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီထဲမှာရွေးစရာကိုနှိပ်ရလိမ့်မယ် ဆက်လုပ်ပါ
ပေါ်လာလိမ့်မည်လာမည့်ဝင်းဒိုးကိုကျနော်တို့ option ကိုနှိပ်ပါလိမ့်မယ် SI
နောက်ပြတင်းပေါက်အသစ်တစ်ခုကိုပြလိမ့်မည် ကျနော်တို့စက်ရုံ Recovery ကို restore ချင်တယ်အကယ်၍ ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုသင်သိမ်းဆည်းလိုပါက၊ စက်ရုံတည်ဆောက်မှုထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိလျှင်၊ ထို option ကိုနှိပ်ပါ။ NOအကယ်၍ သင်သည်မူလ Factory Recovery ကိုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားလိုပါက YES ရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ။ TWRP Recovery ကိုဆက်လက်ထားရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်လူတိုင်း၏အကောင့်တွင်ဖြစ်သည်။
ဤအရာပြီးသည်နှင့် SuperUser အပလီကေးရှင်းသည်၎င်းကို စတင်၍ ပင်စတင်အလုပ်လုပ်သည် terminal ကိုအလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မယ်, ထို့နောက် SuperUser application သည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည် SuperUsuario ခွင့်ပြုချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ၏ Root.
KingRoot နှင့်အလားတူအက်ပ်များမှ Root ဖယ်ရှားပစ်ရန်
သင်၏ Android ကို root လုပ်ရန်အသုံးပြုသော application သည် အကယ်၍ ဖြစ်သည် KingRoot သို့မဟုတ် KingoRoot ကဲ့သို့အလားတူ application များ သို့မဟုတ်အခြား Root ခွင့်ပြုချက်များကိုစီမံရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသောစတိုင်၏အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ Kingroot ကိစ္စတွင်လိုက်နာရန်လုပ်ငန်းစဉ်သည် SuperUser နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ application ကို run ပြီး KingRoot ကို uninstall လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုဖယ်ရှားရန် Option ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ KingRoot ဖြုတ်ပါ.
SuperSu အက်ပလီကေးရှင်းရှိသကဲ့သို့, ထို option ကိုနှိပ်တဲ့အခါ KingRoot ဖြုတ်ပါ လက်ခံခြင်းကိုနှိပ်ပါ။ လျှောက်လွှာသည် Root ကိုဖျက်သိမ်းရန်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်ရန် terminal ကိုပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ခံရန်ကိုနှိပ်ပါ။
KingoRoot ကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများတွင်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အသုံးချပရိုဂရမ်ဆက်တင်များနှင့်ဆင်တူသည်။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုပြသထားသောအခြားနည်းများဖြင့်၎င်းကိုအောင်မြင်စွာအမြစ်တွယ်ခဲ့သူဖြစ်လျှင် Google Play Store ကိုရှာရန်အခြားရွေးချယ်စရာအပလီကေးရှင်းများကိုရှာဖွေရလိမ့်မည်။ သင်၏ Android ကိုဖယ်ထုတ်ပါ.
Cyanogenmod အသုံးပြုသူများသည် Pokemon Go ကိုမည်သို့ကစားရမည်နည်း
အကယ်၍ သင်သည် Cyanogenmod အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက၎င်းကိုအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး၎င်းသည် ၀ င်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် Developer ဆက်တင်များ နှင့် Root Access option မှသို့မဟုတ် Roo လက်လှမ်းမှီt ကိုနှိပ်ပါ, ထို option ကိုရွေးချယ်ပါ ရက်ရာဇာ, Pokemon Go ကိုအခက်အခဲမရှိကစားနိုင်ပြီ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Pokemon Go ကိုသင်ကစားလိုပါက သင်သည်အမြစ်ကိုယဇ်ပူဇော်လိုသည်မဟုတ်ထို့နောက်ငါသင်ပေးသောဤအခြား post ကိုဖြတ်သွားရန်သင့်အားအကြံပေးသည် အမြစ်ကိုဖုံးကွယ်ထားပါ။ ထို့နောက် root router terminal မှ Pokemon Go ကိုကစားနိုင်သည်.
မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal မှ Pokemon Go ကိုဆက်လက်ကစားရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလုံးဝဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့် Root ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Pokemon go သို့မဟုတ်ကစားနိုင်သည့်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှု application များကိုသုံးရန်၎င်းကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်လှည့်ကွက်မှတဆင့် Root အားထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ။ root လုပ်ထားသော Android terminal မှ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android Root ပါ » [UnRoot] Pokemon Go ကိုကစားဖို့ Android ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ။ Cyanogenmod အသုံးပြုသူများအတွက်လည်းတရားဝင်
၎င်းသည် Pokemon Go ၏မှတ်တိုင်စာရင်းတွင်ဒေါင်းလုပ်အရေအတွက်နှင့်အစရှိသဖြင့်ခွဲယူထားသင့်သည်။ ဂိမ်းသည်အသုံးပြုသူများသည် root ခွင့်ပြုချက်ကိုရပ်တန့်စေလိမ့်မည်ဟုမည်သူတွေးမိမည်နည်း။
အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှ Root ဖြစ်သင့်တယ်, သငျသညျငါ့အားရှင်းပြနိုင်မလား အကယ်၍ သင်သည် Android terminal တစ်ခုကိုဝယ်ယူလျှင်၎င်းသည်၎င်း၏ဖိုင်များနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုသင်မထင်ပါသလော၎င်းအတွက်သင်ပိုင်ဆိုင်ပြီး၎င်းကိုဝယ်ရန်သင်ပိုက်ဆံကုန်ခဲ့ပြီလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ root နဲ့ terminal terminal မှာသင့်ရဲ့ app ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုပိတ်ပင်ရန်ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်၌အခွင့်အရေးအားလုံးရှိသည်
Rene လိုဏ်ဂူ ဟုသူကပြောသည်
Hello Friend Francisco, ငါ Samsung Galaxy S6 Edge + ရဲ့မူလ ROM ကိုပြန်သွားဖို့သင်ခန်းစာတစ်ခုလုပ်နိုင်ရင် TWRP RECOVERY ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
RENE CUEVA သို့စာပြန်ပါ
Juan Pablo Nunez ကို ဟုသူကပြောသည်
supersu ၏အမြစ်ကိုဖယ်ရှားသောအခါ .. ဘယ်လိုပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်သလဲ
juan pablo nunez အားပြန်ပြောပါ
Pixel XL ၏ရှေ့နှင့်နောက်ဖက်ရှိပြန်ဆိုချက်များအသစ်ပေါ်လာသည်